Olee otú ibudata free ụdaolu si Zedge
Zedge bụ a na-ewu ewu na ngwa na-enyeworo ọtụtụ ndị aka chọta Android ụdaolu, akwụkwọ ahụ aja, mkpu na ada ụda na Ịma Ọkwa ụda. Nke a ngwa nwere elu àgwà ọdịnaya featuring ọtụtụ edemede nke ụdaolu, akwụkwọ ahụ aja na ngosi ụda. E mere ya na-mfe iji interface-eme ka ọ dị mfe ndị dị mkpa ego maka customizing gị Android ekwentị. Ọ nwere Ụdị kwa na udi otu selector ngwá ọrụ na-enyere aka ịnyagharịa site Zedge nchekwa data nke ụdaolu, Ịma Ọkwa na akwụkwọ ahụ aja na ala. Na Zedge, ị nwere ike ibudata ihe ọ bụla ọdịnaya dị ma na-eso ya site na Facebook, Twitter ma ọ bụ ndị ọzọ na-akwado ngwa. A na ngwa na-emelite ugboro ugboro na ị ga-ahụ na ọ dị mfe ịnyagharịa. Ọ bụrụ na ị na-mbiba nweta nkwalite gị Android ngwaọrụ mkpanaaka, mgbe ahụ, Zedge bụ ihe ngwa na-amalite na.
Nkebi nke 1: Olee otú ibudata free ụdaolu si Zedge si website
Nkebi nke 2: Olee otú ibudata free ụdaolu si Zedge si Android ngwa
Nkebi nke 3: Olee otú ibudata free ụdaolu si Zedge si iOS ngwa
Nzọụkwụ 1. Gaa Zedge website na ịnyagharịa ka ringtone page. Ịnwere ike ịchọgharị tọn apụta ụdaolu gụnyere apụta, na-ewu ewu ma ọ bụ na-adịbeghị anya. I nwekwara ike na-aga niile Atiya ngalaba na-ahọrọ gị Atiya si dropdown menu.
Nzọụkwụ 2. Ị ga-ahụ tọn free ụdaolu ndokwa dị na udi na ị họrọ. Họrọ ọkacha mmasị gị ringtone site na ịpị edemede egosipụta dị ka e gosiri esereese n'okpuru.
Nzọụkwụ 3. Mgbe ịpị na ọkacha mmasị gị ringtone si egosipụta ndepụta, ị ga-eduzi n'ime ọzọ page. Pịa bọtịnụ 'Sinụ Ringtone' button.
Nzọụkwụ 4. Ị ndị fọrọ nke nta n'ebe ahụ. Pịa bọtịnụ 'download' na-amalite nbudata
Nzọụkwụ 5. Ị ga-kpaliri ịbanye gị na aha njirimara na paswọọdụ. Ị na-adịghị jụrụ aha, ma ịbanye random ọmụma na i nwere ike na-echeta na-esonụ download. Download ga-amalite ozugbo mgbe abanye ọmụma jụrụ. Zọpụta dechara faịlụ n'ime kọmputa gị.
Nzọụkwụ 6. Zedge naanị ekwe ka MP3 downloads. Ọ bụrụ na i bu n'obi na-agafeta ringtone na ị ebudatara n'ime gị iPhone, ị ga-tọghata MP3 faịlụ ndọtị gị ebudatara ringtone n'ime a M4R faịlụ ndọtị.
Zedge awade free ụdaolu, akwụkwọ ahụ aja na ngosi ada na i nwere ike iji hazie gị Android mobile ngwaọrụ. Ị nwere ike ibudata gị free ringtone si Zedge si Android ngwa N'okpuru ebe m gụnyere nzọụkwụ site nzọụkwụ na ụkpụrụ nduzi na otú i nwere ike ibudata free ụdaolu si Zedge si Android ngwa.
Nzọụkwụ 1. Gaa Google play website ebe ị nwere ike ịnweta ngwa a. Ị ga-banye na site na gị Gmail akaụntụ iji budata na wụnye ya.
Nzọụkwụ 2. Pịa na na 'wụnye' button iji wụnye Zedge si Android ngwa n'ime ngwaọrụ gị. Ngwa gị ga-arụnyere na-akpaghị aka na ngwaọrụ gị
Nzọụkwụ 3. Zedge si Android ngwa ga-arụnyere na mkpanaka gị na ngwaọrụ. Ẹkedori a na ngwa na ọ ga-eweta ihe dị mfe iji interface egosi ọtụtụ edemede dị ka akwụkwọ ahụ aja, ndụ na akwụkwọ ahụ aja, ụdaolu, ngosi na egwuregwu. Ị ga-ahụ ọzọ ngalaba na-egosi edemede dị ka m downloads, m ọkacha mmasị, ntọala, enyemaka na ozi ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 4. Go aka na ngalaba aha ya bụ 'ringtone' na-emeghe ya iji nweta a nnukwu Atiya ma ọ bụ ụdaolu nke ị nwere ike ibudata maka free. Ịnwere ike ịchọgharị tọn apụta ụdaolu gụnyere apụta, na-ewu ewu ma ọ bụ na-adịbeghị anya
Nzọụkwụ 5. Họrọ ọkacha mmasị gị ringtone. Ị ga-enweta abụọ nhọrọ; ma na-egwu ya ma ọ bụ na ibudata ya. Họrọ nhọrọ nke na nbudata na ozugbo gị ringtone ga-amalite ibudata.
Zedge awade free ụdaolu, akwụkwọ ahụ aja na ngosi ada na i nwere ike iji hazie gị Android mobile ngwaọrụ. Ị nwere ike ibudata gị free ụdaolu iji Zedge si iOS ngwa. N'okpuru ebe a, m gụnyere nzọụkwụ site nzọụkwụ na ụkpụrụ nduzi na otú i nwere ike ibudata free ụdaolu si Zedge si iOS ngwa.
Nzọụkwụ 1. Gaa Google play website ebe i nwere ike ibudata a na ngwa. Ị ga-banye na site na gị Gmail akaụntụ iji budata na wụnye ya. Gaa iTunes 'website ma chọọ ngwa a. Ị adịghị mkpa iji banye iji budata ngwa a. Ị na-adịghị mkpa ịzụta a ngwa, ya mere nbudata bụ free.
Nzọụkwụ 2. Pịa na 'free download' button na-amalite gị nbudata usoro. A na ngwa na-adịghị arụnyere na na ekwentị gị. Mkpa ka ị na ibudata ya wee wụnye ya mgbe e mesịrị.
Nzọụkwụ 3. Zedge si iOS ngwa ga-amalite ibudata ka anya dị ka ị pịa bọtịnụ n'elu. Mgbe download na dechara, wụnye ya na ngwaọrụ gị na-eme n'aka e ezu ohere hapụrụ na ngwaọrụ gị iji mezue nwụnye usoro. Ẹkedori a na ngwa na ọ ga-eweta ihe dị mfe iji interface egosi edemede dị ka akwụkwọ ahụ aja, ụdaolu na akwụkwọ. Ị ga-ahụ ọzọ ngalaba na-egosi edemede dị ka mmekọrịta na iTunes, ike iṅomi QR koodu, ntọala, enyemaka na ozi ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 6. The iPhone mobile ngwaọrụ akwado naanị ndị ụdaolu na .m4r extensions. Zedge si iOS ngwa nwere ụdaolu na MP3 faịlụ extensions. The ụdaolu na ị download iji ngwa a na-ụdị MP3 faịlụ extensions. Ya mere, ị ga-tọghata ndị MP3 ụdaolu n'ime .m4r faịlụ ndọtị nke nwere ike nabatara iPhone mobile ngwaọrụ. Iji mezuo nke a, i kwesịrị mmekọrịta gị ụdaolu na iTunes.
Ị nwere ike mgbe nyefee gị synced ụdaolu gị iTunes n'ọbá akwụkwọ music ụlọ ahịa dị na gị iPhone
> Resource> Download> Olee otú Download Free Ringtones si Zedge